“အသက် ၃၆နှစ်အရွယ်ရစ်ဘာရီက ရော်နယ်ဒိုထက်တောင်ပိုကောင်းပါသေးတယ် ” #ကွန်မစ်ဆို - SPORTS MYANMAR
“အသက် ၃၆နှစ်အရွယ်ရစ်ဘာရီက ရော်နယ်ဒိုထက်တောင်ပိုကောင်းပါသေးတယ် ” #ကွန်မစ်ဆို
ဖလောရင့်စ်မြို့မှာ ကစားသွားခဲ့တဲ့ စီးရီးအေ ပွဲစဉ်မှာ အိမ်ရှင် ဖီအိုရင်တီးနား အသင်းနဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံ ဂျူဗီ တို့ ဂိုးမရှိသရေ ကျခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာဖီအိုရင်တီးနား အသင်းက ဂိုးပေါက် ခြိမ်းခြောက်မှု အများအပြားနဲ့ ဖိအားပေးသွားနိုင်ခဲ့ ပြီး ဆက်ဇီနီ ရဲ့ လက်စွမ်းတွေကြောင့် ဂျူဗီတုို့သက်သာရာရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နွေရာသီ မှာ ဘိုင်ယန် မြူးနစ် အသင်းကနေ ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး ဖီအိုရင်တီးနား အသင်းအတွက် အခုပွဲမှာ ပထမဆုံး ပွဲထွက် ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ ဝါရင့်တောင်ပံကစားသမားကြီးရစ်ဘာရီက လည်း ခြေစွမ်းပြသသွားခဲ့ပါတယ်။အသင်းပိုင်ရှင် ဖြစ်တဲ့ ကွန်မစ်ဆို ကတော့ ဒီပြင်သစ်သားကြီးဟာဂျူဗီတိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်ဒိုထက်ပိုကောင်းခဲ့တယ် လို့တောင် ညွှန်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
Fiorentina’s French forward Franck Ribery (R) tackles Juventus’ Portuguese forward Cristiano Ronaldo during the Italian Serie A football match Fiorentina vs Juventus on September 14, 2019 at the Artemio-Franchi stadium in Florence. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)
Sky Italia နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ကွန်မစ်ဆိုက – ” ပွဲကောင်းတပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွက် လည်း ကျွန်တော် ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။အသက် ၃၆နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ရစ်ဘာရီရဲ့ ခြေစွမ်းကိုခင်ဗျားတို့ မြင်လိုက်ကြရလားမသိပါဘူး။သူဟာ အံ့မခန်းခြေစမ်းနဲ့ ကစားသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရော်နယ်ဒိုထက်တောင်ပိုကောင်းခဲ့ပါတယ် ” လို့ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဖီအိုရင်တီးနား အသင်းဟာ နွေရာသီဈေးကွက်အတွက် မှာ ရစ်ဘာရီကို အလွတ်ခေါ်ယူမှုအပါအဝင် ကစားသမားသစ်တွေအတွက် ပေါင်သန်း အနည်းငယ်လောက်သာသုံးစွဲထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် လည်း ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာအသုံးပြုထားတဲ့ ဂျူဗီ အသင်းထက်မိမိတို့က ပိုကောင်းတယ်လို့ကွန်မစ်ဆိုက ထိုးနှက်သွားခဲ့ပါသေးတယ်
Juventus’ Portuguese forward Cristiano Ronaldo pours water on his neck to refresh himself during the Italian Serie A football match Fiorentina vs Juventus on September 14, 2019 at the Artemio-Franchi stadium in Florence. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)
ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွန်မစ်ဆိုက –
” ဂျူဗီအသင်းဟာ ကစားသမားခေါ်ယူမှု တွေအပေါ်မှာ ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာသုံးစွဲထားခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပေါင်သန်း ၅၀ လောက်တောင် အနိုင်နိုင် အသုံးပြုထားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အသင်းအရေးနိမ့်မယ်လို့ အားလုံးက ယူဆခဲ့ကြပေမယ့် သူတို့ထက်တောင်ပိုကောင်းအောင်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ” လုိ့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
စီးရီးအေ ရဲ့ အသင်းကောင်းတသင်းဖြစ်တဲ့ ဖီအိုရင်တီးနား တို့ဟာ အခုရာသီအစမှာတော့ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနာပိုလီ၊ ဂျီနိုအာ အစရှိတဲ့ အသင်းတွေကို အရေးနိမ့်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခုပွဲရလဒ်ကြောင့် သူတို့ အသင်းရဲ့ Top4မျှော်လင့်ချက်အတွက် တွန်းအားဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ ကွန်မစ်ဆိုက ယုံကြည်နေပါတယ်။
ကွန်မစ်ဆိုက ဆက်လက်ပြီး – ” ခင်ဗျားတို့သာ အချိန်ပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီအသင်းနဲ့ အတူ အောင်မြင်မှု တခုခုရယူသွားချင်မိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်ကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ တရာသီစာလက်မှတ်တွေကို စံချိန်တင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်တုန်းက မှ မရှိထားဘူးတဲ့ အသင်းမျိုးကိုလည်း တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ အသင်းအနိုင်ရတာကိုခင်ဗျားတို့ မြင်ရပါလိမ့်မယ် ” လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲရလဒ်ကြောင့် ဂျူဗီ အသင်းဟာ ထိပ်ဆုံးက အင်တာအသင်းနဲ့ ၂မှတ်ကွာဟသွားခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာကြားရက်အတွင်းမှာ တော့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်အဖြစ်အေတီကိုအသင်းကို မက်ဒရစ်မြေမှာပွဲကျပ်သွားရောက်ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
“အသကျ ၃၆နှဈအရှယျရဈဘာရီက ရျောနယျဒိုထကျတောငျပိုကောငျးပါသေးတယျ ” #ကှနျမဈဆို
ဖလောရငျ့ဈမွို့မှာ ကစားသှားခဲ့တဲ့ စီးရီးအေ ပှဲစဉျမှာ အိမျရှငျ ဖီအိုရငျတီးနား အသငျးနဲ့ လကျရှိခနျြပီယံ ဂြူဗီ တို့ ဂိုးမရှိသရေ ကခြဲ့ပါတယျ။ဒီပှဲမှာဖီအိုရငျတီးနား အသငျးက ဂိုးပေါကျ ခွိမျးခွောကျမှု အမြားအပွားနဲ့ ဖိအားပေးသှားနိုငျခဲ့ ပွီး ဆကျဇီနီ ရဲ့ လကျစှမျးတှကွေောငျ့ ဂြူဗီတုို့သကျသာရာရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
နှရောသီ မှာ ဘိုငျယနျ မွူးနဈ အသငျးကနေ ထှကျခှာလာခဲ့ပွီး ဖီအိုရငျတီးနား အသငျးအတှကျ အခုပှဲမှာ ပထမဆုံး ပှဲထှကျ ပါဝငျလာခဲ့တဲ့ ဝါရငျ့တောငျပံကစားသမားကွီးရဈဘာရီက လညျး ခွစှေမျးပွသသှားခဲ့ပါတယျ။အသငျးပိုငျရှငျ ဖွဈတဲ့ ကှနျမဈဆို ကတော့ ဒီပွငျသဈသားကွီးဟာဂြူဗီတိုကျစဈမှူး ရျောနယျဒိုထကျပိုကောငျးခဲ့တယျ လို့တောငျ ညှနျးဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
Sky Italia နဲ့ အငျတာဗြူးမှာ ကှနျမဈဆိုက – ” ပှဲကောငျးတပှဲဖွဈခဲ့တဲ့ အတှကျ လညျး ကြှနျတျော ကနြေပျပြျောရှငျမိပါတယျ။အသကျ ၃၆နှဈအရှယျရှိနပွေီဖွဈတဲ့ ရဈဘာရီရဲ့ ခွစှေမျးကိုခငျဗြားတို့ မွငျလိုကျကွရလားမသိပါဘူး။သူဟာ အံ့မခနျးခွစေမျးနဲ့ ကစားသှားခဲ့တာဖွဈပွီးရျောနယျဒိုထကျတောငျပိုကောငျးခဲ့ပါတယျ ” လို့ပွောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဖီအိုရငျတီးနား အသငျးဟာ နှရောသီစြေးကှကျအတှကျ မှာ ရဈဘာရီကို အလှတျချေါယူမှုအပါအဝငျ ကစားသမားသဈတှအေတှကျ ပေါငျသနျး အနညျးငယျလောကျသာသုံးစှဲထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဒါကွောငျ့ လညျး ပေါငျသနျးပေါငျးမြားစှာအသုံးပွုထားတဲ့ ဂြူဗီ အသငျးထကျမိမိတို့က ပိုကောငျးတယျလို့ကှနျမဈဆိုက ထိုးနှကျသှားခဲ့ပါသေးတယျ
ဒီအကွောငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ကှနျမဈဆိုက –
” ဂြူဗီအသငျးဟာ ကစားသမားချေါယူမှု တှအေပျေါမှာ ပေါငျသနျးပေါငျးမြားစှာသုံးစှဲထားခဲ့ပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ကတော့ ပေါငျသနျး ၅၀ လောကျတောငျ အနိုငျနိုငျ အသုံးပွုထားခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ဒီနေ့ ပှဲမှာကြှနျတျောတို့အသငျးအရေးနိမျ့မယျလို့ အားလုံးက ယူဆခဲ့ကွပမေယျ့ သူတို့ထကျတောငျပိုကောငျးအောငျကစားနိုငျခဲ့ပါတယျ ” လို့ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
စီးရီးအေ ရဲ့ အသငျးကောငျးတသငျးဖွဈတဲ့ ဖီအိုရငျတီးနား တို့ဟာ အခုရာသီအစမှာတော့ရုနျးကနျနခေဲ့ရတာဖွဈပွီးနာပိုလီ၊ ဂြီနိုအာ အစရှိတဲ့ အသငျးတှကေို အရေးနိမျ့ထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ အခုပှဲရလဒျကွောငျ့ သူတို့ အသငျးရဲ့ Top4မြှျောလငျ့ခကျြအတှကျ တှနျးအားဖွဈစလေိမျ့မယျလို့ ကှနျမဈဆိုက ယုံကွညျနပေါတယျ။
ကှနျမဈဆိုက ဆကျလကျပွီး – ” ခငျဗြားတို့သာ အခြိနျပေးမယျဆိုရငျ ကြှနျတျော ဒီအသငျးနဲ့ အတူ အောငျမွငျမှု တခုခုရယူသှားခငျြမိပါတယျ။လှနျခဲ့တဲ့ နှဈလလောကျကို ပွနျကွညျ့မယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ဟာ တရာသီစာလကျမှတျတှကေို စံခြိနျတငျရောငျးခနြိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဘယျတုနျးက မှ မရှိထားဘူးတဲ့ အသငျးမြိုးကိုလညျး တညျဆောကျထားနိုငျခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။တခြိနျခြိနျမှာတော့ကြှနျတျောတို့ အသငျးအနိုငျရတာကိုခငျဗြားတို့ မွငျရပါလိမျ့မယျ ” လို့ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒီပှဲရလဒျကွောငျ့ ဂြူဗီ အသငျးဟာ ထိပျဆုံးက အငျတာအသငျးနဲ့ ၂မှတျကှာဟသှားခဲ့ရပါတယျ။သူတို့ဟာကွားရကျအတှငျးမှာ တော့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျအဖွဈအတေီကိုအသငျးကို မကျဒရဈမွမှောပှဲကပျြသှားရောကျရငျဆိုငျရမှာဖွဈပါတယျ။